Salaadda si loogu duceeyo cuntada. ? [iyo cunto ilaahay]
Salaadda in la barakeeyo cuntada Waa caado ilaa maanta ansax ah dhammaan qoysaska.
Waa qeyb ka mid ah tababarka carruurta waana wax xitaa xitaa laga hirgaliyo iskuulka.
Muhiimadda ay leedahay in salaadda lagu tukado waxay tahay in lagu mahadnaqo, qiimeynta cuntada aan cunno iyo inaan weydiisano kuwa aan haysan.
Waa astaan ​​u mahadnaqa ilaahay oo ah kan ina siiya xoog aan ku shaqaysanno, oo aan cunto ku iibsanno, wuxuu na siinayaa xigmad aan ku diyaarinno iyaga iyo barakada haysashada qoys ay wadaagaan.
Xaaladaha halka qoysku uusan miiska wada joogin, weli waa inaan u mahadnaqnaa maxaa yeelay waxaa jira dad aan wax cuni karin, taas oo aan ahayn sababtuna tahay inaysan haysan, laakiin sababtoo ah ma awoodaan sababo caafimaad ama duruufo kale awgood, tani waa inay naga dhigtaa inaan dareemo mahadnaq iyo mid Mid ka mid ah astaamaha muujinaya tan waa in la tukado wax yar ka hor inta aan la cunin.
1 Salaadda in la barakeeyo cuntada Ma xoog baa?
1.1 Salaadda in la barakeeyo cuntada
1.2 Tukashada si ay ugu mahadceliso cuntada
1.3 Salaadda cuntada
2 Miyaan tukadaa salaadda oo dhan?
Salaadda in la barakeeyo cuntada Ma xoog baa?
Salaadda oo dhami way xoog badan yihiin mar kasta oo ay ku kacaan rumaynta awoodooda.
Barakaynta cuntada waa ficil iimaan leh oo aan ku mahadsanayn oo keliya laakiin sidoo kale aan weydiisanno cunno inuu si wanaagsan ugu dhaco jirkeenna, inuu miro dhalo, si aysan u joojin inay miiskeenna oo ay na siiyaan faa'iidooyinka nafaqada ah Mid kasta ha keeno.
Sidoo kale waxaan weydiisan karnaa kuwa baahan oo aan miiskooda ku haysanin cunno, kuwaas oo cuni kara oo keliya qaniinyada cuntada, waxaan weydiisanaynaa kuwa aan haysanin inay carruurtooda siiyaan, kuwa gaajaysan oo aan haysan. kheyraadka lagu quudiyo.
Salaadda in la barakeeyo cuntada iyo cunnadu way adagtahay maadaama uu jiro iimaan.
Sidaad arki karto, maahan in laguugu mahadnaqo oo keliya cuntada, waa ficil iimaan iyo jacayl u ah dadka kale halka aan nafteenna gelino meeshii kale oo aan weydiisanno baahidooda.
Marka salaadda la ogeysiiyo baahida loo qabo mid kale oo aan weydiisanno isle'eg waxaan ku muujineynaa jacaylka Ilaah ee nolosheena.
Ilaahow Sayidow; warbaahinta si Jadwalkan u dhexeeyaa waxaa jira isweydaarsi qarsoodi ah oo ka dhexeeya martida;
U doodista cuntada aad na siisay maanta si aan macaash u helno;
Kii aan weli cunin Ha tijaabin midhaha abuurkaaga quruxda badan.
Waxaan kugu jeclahay Ilaaha Aabbaha ah, oo waxaan kuugu mahadnaqaynaa si xad dhaaf ah wadaagida maanta aad noo fidisay.
Waxaan ku bilaabi karnaa salaadda anagoo ku mahadnaqaya fursadda uu Ilaah ina siinayo inaan awoodno inaan nafteenna si sax ah u quudinno.
Markaa waxaan weydiisan karnaa qofka dhibaatada qaaday inuu diyaariyo cuntada si aan u cunno, qofka gacan ka geeystay howsha oo dhan si cunnooyinkan ay u soo gaaraan miiskayaga.
Waxaan weydiisaneynaa kuwa aan haysan oo aan weydiisaneynaa in kibis maalmeedka gacanta lagu dhigo gacanta qof walba, ugu dambeyntiina, waxaan mar labaad u mahadcelineynaa mucjisada nolosha.
Tukashada si ay ugu mahadceliso cuntada
Aabe Quduus ah; maantana waan ku weydiineynaa
Waxaad nagala qaybgashaa miiskan oo aad ugu ducaysaa kibista aan daqiiqad uun ku dhadhamin doonno; Waxay macnaheedu tahay inay kuwaani yihiin midhihii caafimaadkeena hana ka tagina kii hada u halgamaya inuu qaniino.
Sayidow, waan kugu mahad naqaaynaa, oo nimcadeenuna way gaaban tahay, Sidee ayaan ugu nasiib badanahay cuntooyinkaas!
Noo sheeg jacaylkaaga iyo iftiinka dariiqa u horseeda qolkaaga.
Mahadcelintu waa wanaag oo aad u tiro yar maanta, waxaan ku noolahay adduun xawaare aad u sareeya ku socda oo aad u yar oo joojiya inaad mahadisaan.
Ereyga Ilaah waxaa ku jira sheeko sheegeysa sheekada qaar baraska leh oo Ciise u oggolaaday mucjisooyinka bogsashada iyo mid keliya oo ka haray inuu ku mahadnaqo.
Marar badan tani waxay ku dhacdaa nolosheena.
Waxaan kaliya dan kaheleynaa cunida, quudinta nafsadaada laakiin mahadnaqida waana wax u baahan nolasheena.
Maanta aabbe aad u jecel, ku mahad naqo kuwa miiska jooga oo dhan;
Haddaba waxaa barakaysan kii wax cunay; U duceeya kii u oggolaaday inay halkan joogaan; Una barakee, intaa waxaa u dheer, kan ah kii ku barbaaray mid kasta oo kuwan ka mid ah.
Aabe Quduus ah! Nasiibka aad maanta siisay, waxaan si aad ah ugu mahadnaqaynaa oo naxariis darraanta aan dhammaadka lahayn ee cibaadada aan u mahadnaqno rootida aad maanta miiska saartay.
Tusaalaha ugu wanaagsan ee salaadda cunnada waxaa lagu arkaa isla Ciisihii reer Naasared ee ka mahadceliyay cunnadii ay cuneen.
Waxaa jira mucjisooyin oo sugaya a duco si ay noogu soo gaaraan iyo mucjisooyinka cuntada maalinlaha ah ayaa ka mid noqon kara.
Waqtiyadan u eg inay adagtahay in lagu mahadceliyo duco ahaan mudnaanta leh helitaanka cuntada aan u baahan nahay waa ficil iimaanka iyo jacaylka Ilaah.
Miyaan tukadaa salaadda oo dhan?
Kaliya waxaad u baahan tahay inaad duceyso duco si aad ugu ducayso cuntada hal jeer cuntada ka hor. Waxa aad sameyn karto waa tukashada salaad ka duwan cunn kasta.
Waxay ku kala duwanaan kartaa maalinba maalin, maalin ilaa toddobaad ama xitaa bil ilaa bil.
Had iyo jeer xusuusnow in waxa ugu muhiimsani ay tahay in iimaanka lagu helo Ilaaha Rabbigeenna ah. Iimaanka iyo aaminaaduna waa aasaaska salaadda kasta.
Salaadaha awoodda leh si aad u gaadho nimco oo aad u fuliso waxyaabaha aad jeceshahay
U soo ducee duco si aad uhesho qof kale oo aad uhesho sheeko jaceyl
Baro ducada cafiska ruuxiga ah